March | 2013 | ejnetwork
How to Fix *No More Connection error* on XP SP2~!
Posted by edwardjude on March 21, 2013
# ကျွန်တော်တို့ Windows XP သုံးပြီး Network Sharing လုပ်ကျတဲ့အခါမှာ ဒီလိုမျိုး error ကို ကြုံဖူးကျမှာပါ။
# ဥပမာ အင်တာနက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ပေါ့။ Client ၁၅လုံးရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ၁လုံးမှာ Cafe Management Server နဲ့ လာသုံးတဲ့သူတွေ အပျင်းပြေအောင် MTV, Small Game, MP3 အစရှိသဖြင့် Share ထားတက်ကြပါတယ်။
# ကျန် ၁၄လုံးဆီကို Map Network Drive ပုံစံမျိုးနဲ့ Desktop မှာ တင်ပေးထားလေ့ ရှိပါတယ်။
# ဆိုင်က လူကျ လာပါပြီ။ ချစ်သူများနေ့ဆိုပါတော့။ စက်အပြည့်ပေါ့။ လူတိုင်းက အင်တာနက်သုံးရင်းနဲ့ အပျင်းပြေ သီချင်းနားထောင်မယ်၊ zuma ဆော့မယ်၊ MTV ကြည့်မယ်၊ ဘာဘာညာညာနဲ့ Server ဆီက Resource ကိုလှမ်းသုံးပါပြီ။
# ကဲ…အဲ့မှာကိုယ်ထိုင်ထားတဲ့ Server က NOS ကလဲ မဟုတ်ပြန်။ ရိုးရိုး XP ဆိုရင်တော့ အပေါ်က error မျိုးပေါ်ရင် ဒုက္ခနဲ့ လှလှ နဲ့ စတွေ့ပါပြီ။
# DOS ဖြစ်တဲ့ XP ကို စတင်ရေးစဉ်ကတည်းက maximum Concurrent connection ကို ၁၀ ဆိုပီး ထည့်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲတာကြောင့် A+, Networking သင်တန်းတွေမှာ workgroup ချိတ်ရင် ၁၀ လုံးထက်(သို့) ၁၀လုံးထက်မပိုဘူးလို့ သင်ခဲ့ရကြပါတယ်။
# အဲဒီ error ကို ဒီ Patcher လေးနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ file ကတော့ TCPIP.SYS ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးပါ။
Credit to: : http://www.lvllord.de/
Download Here: : http://www.lvllord.de/download.php?url=en/EvID4226Patch223d-en.zip
# Maximum Concurrent Connection ကို 10 to 16,777,214 ထိ Change Limit သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်။
#ံHacker နဲ့ Cracker သမားတွေကို ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးတင်ရမှာတော့ အမှန်ပါပဲ 🙂
Leaveacomment Posted in Windows Related
How to install Zawgyi Keyboard Layout on Ubuntu 12.10~!
Posted by edwardjude on March 12, 2013
# ubuntu မှာ installation လုပ်တဲ့အပိုင်းကို သူ့ရဲ့ Official site မှာတင်ထားပေးပီးသားပါ။ ver.9 — ထင်ပါတယ်။ လင့်ခ်ကတော့ဒီမှာပါ။
*Credit to –developer*
# အခုအချိန်မှာတော့ zawgyi_keyboard_0.3.3.tar.gz ထိပဲရှိပါသေးတယ်။ကဲ.. အဲတာကို ဒေါင်းလိုက်ပါမယ်။
# ဒေါင်းပီးသွားရင် terminal ထဲကနေ Download လုပ်ထားတဲ့နေရာကိုသွားပါမယ်။
> cd /> cd /home/ej/Downloads
# ပီးရင် tar command သုံးပြီး zip ဖြည်ချပါမယ်။
> tar zxf zawgyi_keyboard_0.3.3.tar.gz
# ပီးရင် zawgyi directory ထဲကို ထပ်ဝင်လိုက်ပါ၊ python script extension *py* နဲ့ဆုံးတဲ့ဟာကို *run* ပါမယ်။
> python zawgyi_keyboard.py
# option တွေကိုတွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်က install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်*i* ထည့်ရိုက်ပေးပါ။ installation ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင် စက်ကို effect ဖြစ်ဖို့ restart လုပ်ဖို့ inform ပေးပါလိမ့်မယ်။ reboot လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
# ပြန်တက်လာတဲ့ အချိန်ကျရင် system setting ထဲကို သွားပါ။ Keyboard Layout ထဲကို ၀င်ပါ။ ဘယ်ဘက်ထောင့်စွန်းအောက်နားမှာ + sign လေးကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ။
# Choosealayout ဆိုတဲ့ Box လေးတစ်ခုတက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ Burmese ဆိုတဲ့ဟာကို Add လုပ်ပေးပါ။ ဒါဆို ဘေးဘယ်ဘက် layout ဘက်မှာ Burmese ဆိုပီး လာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
# layout change ဖို့အတွက် Key Sequence ကို layout မှာ Burmese ကိုရွေးပီးတော့ option ကိုရွေးပေးပါ။ Key(s) to change layout မှာ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့ Key Sequence ကို ရွေးနိုင်ပါတယ်။
Leaveacomment Posted in Linux Related